Haddii Aad Ninka Ku Aragto Calaamadahan Gabaryahay Iska Jir - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»Haddii Aad Ninka Ku Aragto Calaamadahan Gabaryahay Iska Jir
Haddii Aad Ninka Ku Aragto Calaamadahan Gabaryahay Iska Jir
Marka ninku kuu gaado jaceyl waali, taasi waxay isku bedeli kartaa halis, xittaa wuxuu kugu dhaawici karaa magaca jacayl.
Sidaa darteed, side ku ogaaneysa in ninku jaceyl waali ah kuu qaaday?
Haddii ninkaaga ama saaxiibkaa uu lasoo baxo calaamadahan, aad u taxadar.
9 Nooc Oo Ragga Kamid Ah Oo Ay Tahay In Gabar Walba Ay Heshaa
Qiyaano ayuu kugu eedeeyaa
Xittaa caddeyn ma hayaan balse waxay mar kasta u maleeyaan inaad qiyaaneyso sababtoo ah aad ayaad u qurux badantahay ama wuxuu ku arkay adigoo nin kale la hadlaayo.
Firaaqo kuma siiyo
Way adagtahay inaad hesho waqti kaligaa ah. Taasi waxaa sabab u ah wuxuu u heystaa inaad qiyaaneysi haddii uusan si dhow kuula socon. Taasi maahan jacayl waa mashquulin.
Xornimo kuma siiyo
Xushmad uma u haayo xornimaada, aad ayuuna ula socdaa tallaabo kasta oo aad qaado. Wuxuu aqrinayaa farriimahaaga isagoo xittaa kuweydiinaya lambar sireedyada barahaaga bulshada si uu u xaqiijiyo inuusan jirin nin xiriir kula leh.
Wuxuu kaa ilaaliyaa dadka aad jeceshahay
Kuuma sheegi doono inaad joojiso aragtida saaxiibadaa ama booqashada qoyskaaga inbadan balse wuxuu billaabi doonaa inuu cabto inaadan waqti badan la qaadan.
Wuxuu rabaa inaad ag joogto mar kasta isagoo maseeraya markaad waqti la qaadato dad kale.
Maseyr yar waa caadi balse haddii ninkaaga uu aad uga maseyro in saaxiibadaa aad lasoo dalxiisto ama meel u raacdo waxay noqon kartaa inuu kugu waashay.
Waa inuu kula socdaa balse ma ahan 15 daqiiqo walba kadib. Wuxuu u baahanyahay inuu ogaado inaad leedahay nolol aanan agtiisa xirneyn.
Waa inuu kuu ogolaadaa inaad hawo qaadato isla markaan uu ku siiyo fursad uu ugu yaraan kuugu xiiso.
8 Waxyaabood Oo Fudud Oo Gabaryahay Uu Gacaliyahaaga Kaa Filayo
Cuntooyinka u fiican Jilba xanuunka, Dhammaan Kalagoysyada iyo Kuwa u xun
Nin farta iska jaray markii u codeeyay xisbi khaldan
3 major signs you are living a broke lifestyle
3 tips to secure a job when you have no experience
3 things you should never do in the name of love
Farriimo Jacayl Oo Lagu Sagootiyo Gacaliyahaaga Oo Safar U Socdo
Hooyo Soomaaliyeed oo hindistay farsamo nooceedu cusub yahay (Sawirro)
3 Waxyaabood oo sabab u ah inay gabadha ku nacdo